Wararka naga soo gaaraya degmada Balcad ee gobalka Shabeelada dhexe ayaa sheegaya in weerar jidgal ah lagu qaaday Gaadiid ay wateen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, xilli ay marayeen duleedka degmadaas.
Gaadiidkaas oo ay wateen Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya ayaa xilli ay marayeen halka loo yaqaano ilbiq waxaa la sheegay in weerar jidgal ah ay ku qaadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab, waxana halkaasi ka dhacay dagaal sababay khasaaro kala duwan.
Dad ku sugan Balcad ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeesanayeen Ciidamada dowladda & Al-Shabaab oo dagaalka uu ku dhexmaray agagaarka wadada Ilbiq oo ku taal inta u dhaxeysa degmada Balcad & Tuulada Qalimow.
Al-Shabaab oo sheegtay mas’uuliyadda weerarkas ayaa waxaa ay sheegeen inay dileen 5 askari oo ka tirsanaa Ciidamada la weeraray, sidoo kalena ay gubeen mid kamid ah gaadiidka dagaalka wallow aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya.
Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Maamulka degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhee weli ka hadlin weerarkaas, waxaana xusid mudan in dhowr jeer weeraro kala duwan inay ka dhaceen wadada xiriirisa degmooyinka Jowhar & Balcad.
Previous articleMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay muranka doorashooyinka
Next articleKenya oo cadeysay mowqifkeeda Warbixintii Guddiga IGAD